Gọọmet ndị njem nleta hụrụ Lyon n'anya: Taa, bọmbụ gbawara na Brioche Bakery
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Gọọmet ndị njem nleta hụrụ Lyon n'anya: Taa, bọmbụ gbawara na Brioche Bakery
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akwụkwọ akụkọ French Polynesia • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Lyon mara site na ndị gourmet ndị hụrụ ya na ndị njem si n'akụkụ ụwa niile. Brioche Dorée Bakery bụ ebe kachasị amasị maka ụlọ oriri na-eme achịcha mepere emepe nke e wuru na nkwa dị mfe iji nye ngwaahịa ọdịnala French nke ezigbo mma na ịdị ọcha na ngwa ngwa ọrụ. Brioche Bakery dị na ndị njem na ndị obodo na-ewu ewu na-agafe agafe mpaghara nke a mara mma French obodo.
Taa, ebe a na-eme achịcha ghọrọ ebe egwu egwu kachasị na France. N'ụzọ dị mma, mwakpo a na mgbede Tọzdee gburugburu 5.00pm adịghị egbu egbu ma nwee ikike niile nke mpụ ka njọ. Vidio si ebe ahụ gosiri na kafe Brioche Dorée nwere obere mmebi na ntiwapụ ahụ, nke pụtara na ọ pere mpe.
Ndị akaebe kwukwara na ha hụrụ kposara, nke otu onye ọrụ mpaghara ahụ kwuru na ya so na bọmbụ ahụ. Onye isi ochichi ahụ kwuru na ọ dịkarịa ala mmadụ 8 nwere mmerụ ahụ na-enweghị egwu, mana mgbasa ozi French tinyere ọnụ ọgụgụ ahụ ruru 13, gụnyere nwatakịrị na mmadụ abụọ nwere ike nwee nnukwu mmerụ ahụ. Ndị uwe ojii agbachitere ebe a na-eme bred Brioche Dorée na Rue Victor Hugo, ebe iko na irighiri ihe jupụtara n'ala. Mgbawa ahụ mere na etiti peninshula dị n'agbata osimiri Saône na Rhône nke na-agafe obodo ahụ.
Onye isi ala France bụ Emmanuel Macron kọwara ọgbụgba ahụ dịka "mwakpo" ma kwuo na echiche ya dị na ndị ihe metụtara. Ebumnuche ebumnuche amabeghị ozugbo, mana ndị ọka iwu emeghewo nyocha na enyo egwu nke iyi ọha egwu na ịnwale igbu mmadụ.
Ọfịs ndị ọkàiwu ahụ kwuru na a na-enyo enyo ngwugwu bọmbụ wdị ka ihe kpatara mgbawa ahụ
wuru Mee Central nwa mpụ mmebi egbu egbu irighiri ihe mgbawa ọkacha mmasị France French iko Gọọmet ala ozugbo mmerụ nyocha mara ọhụrụ ndụ obodo dị n'anya ndị hụrụ Lyon etiti Obere igbu ọchụ nbsp Non ụlọ ọrụ ukara meghere uwe ojii ewu ewu nwere ngwaahịa nkwa àgwà kọrọ osimiri idaha ịhụ oké njọ nnukwu mmerụ mwube obere enyo oké ụjọ ụjọ ọgụ iyi ọha egwu obodo ọdịnala obodo ukwu ndị agha mmeri video gara Ndịàmà